रविन्द्र मिश्रले नेपाललाई किन भारतमा गाँभ्ने प्रस्ताव गरे ? यस्ता छन् उनले बोलेका तथ्यहरु-Nepali online news portal
रविन्द्र मिश्रले नेपाललाई किन भारतमा गाँभ्ने प्रस्ताव गरे ? यस्ता छन् उनले बोलेका तथ्यहरु
विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रलाई चुनाव मुखमा नेपाललाई भारतमा गाभ्ने षड्यन्त्र गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । उनीमाथिको यो अारोप नयाँ होइन । उनी अरुको योजनाबाट परिचालिन भएका हुन भन्‍ने कुरा धेरैलाई लागेकै छ ।
यस्तो थियो सच्चाइएको प्रश्न
सन् १०९५ बाट मिश्रले बीबीसीमा जागिर सुरु गरेका थिए । सुरुका केही वर्ष नेपाली सेवामा काम गरेपनि मिश्रले अंग्रेजी भाषाका कार्यक्रम वर्ल्ड टुडे र न्यूज आवर र पछी बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस न्यूज रुपममा काम गरे । उक्त प्रश्न त्यही वर्ल्ड टुडेको अनलाइनमा उक्त प्रश्न राखिएको थियो । जो अहिले पनि हेर्न सकिन्छ । बीबीसीले पुरानाका कार्यक्रम अर्काइभमा राखेको छ ।
एक शुभचिन्तकको प्रचण्डलाई खुलापत्र : तपाई विप्लवसँग मिल्न छोडेर किन एमालेमा विलय हुन गएको ?
विभाजित राप्रपाहरुलाई एक हुन ज्ञानेन्द्रको निर्देशन, आफु संरक्षक भएर अघि बढ्न तयार
रातोपाटी अनलाइनको निराधार समाचारप्रति नेकपाको घोर आपत्ति, भ्रामक समाचार नलेख्न आग्रह
रोल्पामा सभामुख महराका ज्वाइँ केसीलाई राजिनामा दिन नेकपाले दियो चेतावनी, नदिए कार्वाही गरिने
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पूर्वमा राजावादीहरुलाई एकगठ बनाउदै, राजसंस्थाको एजेण्डा बोक्न दबाब दिदै
मदन भण्डारीलाई त्रिशुलीमा खसाल्ने एमालेका नेताहरुले प्रचण्डलाई एकदिन त्यसै गर्नेछन् : किराती